Chọpụta ọmarịcha osimiri mara mma na Huelva | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Huelva, Osimiri
La Uelgbè Huelva na-enye anyị kilomita na kilomita nke ụsọ oké osimiri nwere osimiri mara mma iji nwee ọ weatherụ na ihu igwe ya, ebe ọ bụ mpaghara dị na ndịda Spain na mpaghara Portugal. Taa, njem nleta bụ otu n'ime ọrụ ya kacha enye ego, ebe ọ bụ na ụsọ mmiri a ma ama nwere ọtụtụ ọmarịcha maka ndị bịara Huelva, yabụ anyị ga-enyocha nke bụ oke osimiri mara mma nke Huelva.
E nwere ọtụtụ osimiri na Huelva wee họrọ nke kachasị mma ọ nwere ike ịbụ ntakịrị aghụghọ. N'ezie enwere echiche maka ihe niile masịrị ya na ụfọdụ ndị na-ewu ewu karịa ndị ọzọ mana anyị ga-anwa ịnye echiche banyere osimiri ndị na-ekwesịghị ịhapụ ma ọ bụrụ na anyị ga-aga njem site na Huelva.
1 Osimiri Islantilla
3 Osimiri Matalascañas
4 Osimiri El Rompido
5 Osimiri Torre del Loro
6 Osimiri Punta Umbría
Osimiri a na-ewu ewu, dịka ọ dị emi odude ke ufọt obio Isla Cristina ye Lepe. Ọ bụ ihe karịrị otu kilomita n’ogologo ma nwee ọtụtụ oghere. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ezinụlọ dị n'akụkụ osimiri a ebe ọ bụ otu n'ime ndị nwere ụdị ọrụ dị iche iche dị, nke na-eme ka ihe dị mfe ma ọ bụrụ na ị soro ụmụaka. Ma o nwekwara ebe dị jụụ. N'akụkụ osimiri a, e nwekwara oke ọhịa pine mara mma ma ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị ịwụ anwụ na ụfọdụ dunes nke nwere ike ịbụ ezigbo ebe izu ike. Mgbe ebili mmiri na-apụ, enwere oke osimiri nke ị nwere ike ịgagharị ebe a na-atụ aro ya nke ukwuu ebe ọ bụ na n'ụzọ a anyị nwere ike ịhụ ebe ndị dị nso dị ka Playa del Hoyo. Nke a bụ otu n’ime osimiri ndị kachasị ewu ewu na-enwekwa ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ kwa afọ maka ogo mmiri na ọrụ ya.
Nke a bụ ụdị osimiri ọzọ na ha ga - akwado gị ma ọ bụrụ na ị gaa Huelva. Na Emebeala El Portil n'ụsọ osimiri ọ bụ ezie na ọ dị ugbu a na mpaghara nchekwa. Osimiri a mara mma nke ukwuu, ihe karịrị kilomita atọ n'ogologo, yabụ na anyị agaghị enwe mmetụta nke ndị mmadụ gbara anyị gburugburu ma ọ bụrụ na anyị achọọ ebe zoro ezo nke obodo ndị mepere emepe. Ọ bụ osimiri ọzọ na-acha anụnụ anụnụ na-enye ụdị ọrụ dị iche iche. Nakwa site na mpaghara a ị nwere ike ịhụ Flecha del Rompido.
Nke a osimiri bụ n'ezie ama n’ihi na ọ karịrị kilomita ise n’ogologo ma bụrụ ohere iji ụkwụ rute Doñana National Park, bụ ebe nchekwa ya kachasị mkpa. Ọ na-enye mmiri na ọrụ doro anya, mana ọ na-ejupụtakwa n'oge ọkọchị n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu ma dị nso na Seville, nke mere na ọ bụghị nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị na-achọ nzuzo. Mana n'ezie na ọ bụ ụsọ osimiri a ga-agarịrị n'ihi na anyị nwekwara ike ịnweta ebe nchekwa ihe. Na mpaghara a anyị nwekwara ike ịhụ Torre de la Higuera, owuwu nke narị afọ nke XNUMX dara mgbe ala ọma jijiji Lisbon mere. Nke a bụkwa akụkụ osimiri nke ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu mmiri dịka ikuku ikuku na-abịa.
Osimiri El Rompido
Nke a bụ ihe ọzọ nke osimiri na ị na-aga n'anya, ya mara mma ọlaedo ájá na emi odude ke Marismas del Río Piedras Naturallọ Eke. Nwere ike iji ụgbọ mmiri gaa aja aja nke enwere ike ịhụ site n'ụsọ osimiri, nke a maara dị ka Flecha del Rompido. Ọ bụ ọdụ mmiri dị jụụ nke na-enweghị ọrụ ma ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ okike karịa. N’ebe di nso ka obodo Cartaya bu ebe ana azu azu, ebe mara nma nke nwere ulo ọcha.
Osimiri Torre del Loro
Osimiri a bụ ihe ọzọ n’ime ndị anyị na- -ekwe ka ị na-enwe ebe enweghị ọtụtụ obodo ukwu, naanị ya na okike. Osimiri a nwere ohere dị mma na ebe a na-adọba ụgbọala, n'agbanyeghị na ị ga-esi ebe a gaa n'akụkụ osimiri, n'ihi ya, anaghị atụkarị aro maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị nwere obere mbugharị. Ọ bụ nnukwu osimiri dị kilomita anọ na aja aja ọla edo nke mpaghara ebe anyị ga-ahụkwa ụlọ nche ochie site na narị afọ nke XNUMX nke na-enye osimiri aha ya. Towerlọ elu a bụ nke Palos de la Frontera, Moguer, Almonte na Lucena del Puerto.
Osimiri Punta Umbría
Nke a ga-abụ oke osimiri ọzọ na-ekwo ekwo n’oge ọkọchị n’ihi na ọ bụ osimiri n’akụkụ obodo dị na Punta Umbría. Ọ dị n'akụkụ Marismas de Odiel mpaghara nkịtị ya mere o ji baa nnukwu uru. Ọ bụ osimiri na-enye ọrụ niile na ọ bụ ya mere na ọ na-abụkarị ọkacha mmasị nke ndị na-anọ na mpaghara a, na-enwekwa ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ maka ihe ọ bụla ọ na-enye ndị ọbịa. Agbanyeghị, enwere osimiri ndị ọzọ dị nso karị dị ka La Canaleta. Na nso osimiri dị na Los Enebrales ị nwekwara ike ịgba ọtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mara mma osimiri nke Huelva